भ्रमण वर्षलाई कालो दिनका रुपमा मनाउने छौः दिलिप कुमार श्रेष्ठ - Ujyaalo Nepal
भ्रमण वर्षलाई कालो दिनका रुपमा मनाउने छौः दिलिप कुमार श्रेष्ठ
By ujyaalo	 Last updated Nov 17, 2019 824
सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउने घोषणा गरे बमोजिम देशभरका सबै निकायलाई भ्रमण वर्षसँग जोडने प्रयास गरिरहेको छ । तर देशको सडक यातायातको एक हिस्सा ट्याक्सी व्यवसायिहरु भने सरकारको महत्वाकांक्षी नेपाल भ्रमण वर्ष अभियानमा जोडिन निकै सकस मानिरहेका छन । खासगरी सरकारले आफ्ना जायज मागहरु पुरा नगरिदिएकोले भ्रमण वर्षलाई आफूहरुले सघाउन नसक्ने दाबी उपत्यका ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजले जनाएको छ । आखिर किन ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाज सरकारको महत्वाकांक्षी नेपाल भ्रमण वर्ष कार्यक्रमप्रति असहमति जनाईरहेका छन् त ? यस विषयमा समाजका केन्द्रीय सदस्य तथा सूचना विभाग प्रमुख दिलिप कुमार श्रेष्ठसंग शिव शंकर चौधरीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
उपत्यका ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजले नेपाल भ्रमण वर्षलाई किन कालो वर्षको रुपमा मनाउने निर्णय गरेको हो ?
हामीले अहिले भ्रमण वर्षको मुखमा आएर मात्रै भ्रमण वर्षको विरोध गरेका होईनौं । हाम्रो उद्देश्य पनि भ्रमण वर्ष अभियानलाई असयोग गर्ने वा असफल बनाउने होइन । सरकारले नै हामीलाई विरोधमा उत्रन वाध्य पारेको हो ।
हामीले ११ महिना अघि नै सरकार सामु हाम्रा जायज मागहरु लिखित रुपमा पेश गरी पूरा गर्न आग्रह, अनुरोध र दबाब दिदै आएका हौं । यातायात क्षेत्रसंग सरोकार राख्ने यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी महासाखा, यातायात मन्त्रालय, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग लगायत सम्पूर्ण सरकार निकायमा ज्ञापन पत्र बुझाएरै हामीले माग पुरा गर्न आग्रह गरेका थियौं । तर कुनै पनि निकायले हाम्रा जायज मागहरु उपर कुनै सुनुवाई नै नगरी एक वर्ष समय कटाईदिए । त्यसैले अहिले हामी बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनु परेको हो ।
तपाइँहरुको मुख्य माग चाहिं के हो ?
हाम्रो पहिलो माग हामीलाई निर्वाध काम गर्न दिईयोस् भन्ने नै हो । अहिले ट्याक्सीले दिने सेवा निजी सवारीले दिनु हँुदैन भन्ने माग हाम्रो हो । अहिले यातायात ऐन २०४९ को दफा ८ को उपदफा १ र २ अनुसार दर्ता भएका निजी सवारीहरु दुईपाङ्ग्रे वा चार पाङ्ग्रेले नै ट्याक्सीले दिने सेवा दिईरहेका छन् । जब की सो दफा अनुसार दर्ता भएका निजी सवारी साधनले त्यसरी ट्याक्सीले दिने सेवा आफूले दिन पाउँदैनन् । त्यसका विरुद्ध हामीले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै, लिखित प्रतिवाद गर्दै आएका हौं । तर हाम्रो कुरा सरकारी निकायले सुनवाई नै गरेका छैनन् ।
दोस्रो माग भनेको समयसापेक्ष वैज्ञानिक भाडादर वृद्धि होस् भन्ने हाम्रो माग हो । २०६९ सालदेखि नै बढ्नुपर्ने भाडादार अहिलेसम्म बढाउने पहल नै सरकारले गरेन । त्यसैले समयसापेक्ष भाडादर वृद्धिका लागि अब हामी आन्दोलनमा जानुको विकल्प नै भएन । कम्तीमा भ्रमण वर्षको मुखमा हामी सडकमा आन्दोलित भैरहँदा सरकारले माग पुरा गर्न दवाव पुग्ला भनेर हामी आन्दोलनमा जानु परेको हो । आन्दोलन हाम्रो रहर होईन, सरकारले बनाईदिएको वाध्यता मात्रै हो ।
अर्को कुरा निजी सवारी साधनले दिने सेवाको कुनै अनुगमन, तथ्याँक र दुरी आदिको कुनै रेकर्ड नै छैन । मनपरी पाराले नीजि सवारीले हामीलाई नै बिस्थापित गर्ने गरी सेवा दिने नाममा कानुको उलंघन गरिरहेका छन । त्यसरी अर्काको रोजगारीलाई बिस्थापित गर्ने खालको सबै सेवा दिने निजी सवारीलाई कानुनी कारवाहीको दायरमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ ।
अब तपाईहरु कसरी आन्दोलन अघि बढाउनु हुन्छ त ?
फेरि एकपटक सबै सरकारी निकायलाई शान्तिपूर्ण ढंगमा हाम्रा माग पुरा गराउन माग गर्दछौं । ज्ञापनपत्र कार्यान्वयनका लागि दवाव बढाउछौं । निजी सवारी साधनलाई ट्याक्सीको रोजगारी नखोस्न र यात्रु नबोक्न सचेत गराउँदै प्रचारात्मक अभियान अघि बढाउछौं । हामी चेतावनीपूर्व निजी सवारीलाई यात्रु नबोक्न सचेत गर्दै पर्चा पम्प्लेटिङ गर्दैछौं ।
त्यतिले पनि सरकारलाई दवाव पुगेन भने हामी सरकारले जुन दिन नेपाल भ्रमण वर्षको उद्घाटन समारोह आयोजना गर्दछ, त्यही दिन हामी समानान्तर कार्यक्रम आयोजना गरेर कालो दिवस मनाउने छौं । सिंहदरवारलाई देखाएर हामी भ्रमण वर्षको विकल्पमा कालो दिवस मनाउने छौं ।
तर अन्तिम समयसम्म हामी सरकारले हाम्रा मागहरु पुरा गर्ने आशा र विश्वासमा छौं । तर सधै हामीलाई उपेक्षा गरेमा हामीले भ्रमण वर्ष उदघाटनकै दिनलाई कालो दिनका रुपमा मनाउन वाध्य हुनुपर्नेछ ।
श्रेष्ठ उपत्यका ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
प्रकाशित: १ मंसिर २०७६, आईतवार १०:३१